Kumanaan qaxooti ah oo isaga laabtay Sweden | Somaliska
Ka dib markii Sweden ay isbedalo ku samaysay sharciyada ay bixiso, ayaa waxaa soo badanaya tirada magan-galyo doonka dib ula noqonaya codsigooda oo Sweden isaga baxay. Dad ka badan 3500 qof ayaa dib ulan noqday codsigii magan-galyada. Qaarkood ayaa la sheegay in ay dib ugu noqdeen wadamadii ay ka yimaadeen sida Syria maadaama ay dareemeen in ay ku soo lug’goeen Yurub.
Bishii November ee la soo dhaafay ayaa 600 qof dib ula noqdeen codsigooda. Sweden ayaa u muuqata in ay noqotay meel aan soo jiidasho lahayn oo sidii hore aan loo jeclayn. Maadaama wadanka uu bilaabay bixinta sharciga ku meel gaarka ah ayaa qaxooti badan waxay u arkaan waqti dhumis in halkaan ay ku noolaadaan. Waxaa sidoo kale waqti dheer qaata inta qofka go’aan laga gaarayo taasi oo ay sii dheertahay heerka nolosha xeryaha qaxootiga oo aad u liita iyo cimilada oo qaboow noqotay.
Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayaa aaminsan in tiro ka badan dadkaan ay isaga bexeen Sweden iyaga oo aan cidna u sheegin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa wali Sweden dhibaato ka haysataa sidii wadanka looga saari lahaa dadka sharciga loo diiday, iyadoo boolisku ay sheegeen in kumanaan qof ay dhuumaalaysi ku nool Sweden gudaheeda.
Jimcaale majirtAa dad la siiye sharciga kumeel gaar mise wali lama bilaabin
Jimcaale may jirtaa cid lasiiyay sharciga mu meel gaadhka ah
waan so dhaweynayaaa, waana ku farxay iney isaga laabtaan maxa yeelay culeeskoodi ayaa inaga yaraanaya, qaxootigan tirada badan wax walbo ayey inaga cusleeyeen,
Fikrad aan lala dhicin 6 20
Subxanallaah Qofkan bile Wata war Irsaaqad Alle ku Qoray Cid ka hor istageysaa Ma jirtee Iska daa umadan Dhibta keentay ee Masakiinta ah Cunsuri baad tahay wadan adan adiga leheen bad sidan ku tahay ka waran hadii wadankagii dadkan kugu iman lahayaan sideed yeli leheed
Fikrad lala dhacay 23 4
Qaxooti nacaya Qaxooti kale Bile ka hor ma arkin.
Ileen dadka qaarkiis wee dhibsadan dadka la midka ah maxa ula yaabeenaa SD
Irsaqada alle aya baxsho cidkasto sogashana waxba ima dhibeso waayo wixi iqoran magafayo kaso qaadkana alle aya hayo imanka wanagsan aya waxkasta lagu garaaa
25 sano kuwo iswidhan joogo oo wali cayr qaato ayaa jiro oo waligood aan shaqo kale qabanin kuwaas bile ayaa ka mid ah. Waa maxay cariiriga la galiyey ee uu ka cabanayo. Noocaas oo kale waa kuwa noolasha ka dhacay.
Sharciga ku maalgaarga wali dadlasiiyi malahan bisha abril 2016 ka ayaa labilaabayaa
omar hargeysa says:
asc ugu horeyn maxaa keenay hadey noqanayaan waxay aheed iney dalkooda joogaan
intaay imaanin ha iska sabraan waxii u soo baxaayey leeyihiin.
qaxooti dhab ah dheeldheel kuma noqdo.
Swedan wan imi Waxan ku nola 1 sano wlh wan isga baxay ano cid u sheegin waxan dareemay marka ka baxay in aan xabsi ka so baxay
Swedan wa bila shaqo wa guri dumar